Ch 14 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 14 Luke
14:1 Ary nony fa, Ary Jesosy niditra tao an-tranon'ny iray mpitarika ny Fariseo Izy tamin'ny Sabata mba hihinan-kanina, izy ireo mpanara-maso azy.
14:2 Ary indro, dia nisy anankiray teo anatrehany mbola azom-pahoriana amin'ny edema.
14:3 Sy ny fandraisana andraikitra, Jesosy niteny tamin'ny manam-pahaizana ao amin'ny lalàna sy ny Fariseo, nanao hoe:, "Mety va ny manasitrana amin'ny Sabata?"
14:4 Fa tsy nisy niteny. Na izany aza tena, mihazona azy, dia nahasitrana azy ka nandefa azy.
14:5 Ary mamaly azy, hoy izy:, "Iza moa aminareo no manana boriky na omby latsaka ao an-davaka fantsakana, ary tsy avy hatrany hisintona azy hivoaka avy, tamin'ny andro Sabata?"
14:6 Ary izy ireo tsy afaka ny hamaly ny azy ny amin'izany zavatra izany.
14:7 Ary hoy ihany koa izy nilaza fanoharana, ho an 'ireo izay nasaina, nahatsikaritra ny fomba nifidy ny seza voalohany teo amin'ny latabatra, ka nanao taminy:
14:8 "Rehefa misy manasa anao ho any amin'ny fampakaram-bady, aza mipetraka amin'ny fitoerana voalohany, fandrao olona voninahitra bebe kokoa noho ianao angamba no nanasa ny azy.
14:9 Ary dia izay niantso ianareo sy izy, manatona, Mety hilaza aminareo, 'Omeo ity fitoerana ity ho azy. Ary dia mety hanomboka, henatra, mba haka ny toerana farany.
14:10 Fa raha misy manasa anao, mandeha, mipetraka eo amin'ny toerana ambany indrindra, amin'izay mba, rehefa tonga izay nanasa anao, mba hilaza aminareo, Ry sakaiza, hiakatra ambony kokoa. 'Dia ho voninahitra eo imason'ny ireo izay mipetraka amin'ny latabatra miaraka aminao.
14:11 Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra. "
14:12 Dia hoy koa izy tamin'ny olona izay nanasa azy: "Ary raha manatitra sakafo antoandro na ny sakafo hariva, aza misafidy ny hoe ny namanao, na ny rahalahy, na ny havanao, na ny mpiara-monina manankarena, fandrao mba dia manasa anao amin'ny hiverina sy hamaly fa natao ho anao.
14:13 Fa raha manomana fanasana, dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ary ny jamba.
14:14 Ary dia ho voatahy ianao satria tsy manana fomba hamaly anao. Koa dia, ny valin'asa homeny dia ho ao amin'ny fitsanganan'ny marina. "
14:15 Rehefa misy olona nipetraka nihinana teo aminy nandre izany,, hoy izy taminy:, "Sambatra izay hihinan-kanina ao no amin'ny fanjakan'Andriamanitra."
14:16 Dia hoy izy taminy:: "Nisy olona anankiray nanomana fanasana lehibe, ary nanasa olona maro.
14:17 Ary naniraka ny mpanompony, tamin'ny ora ny andro firavoravoana, mba hilaza ny nasaina ho avy; fa izao zavatra rehetra dia efa vonona.
14:18 Ary niaraka tamin'izay izy rehetra nanomboka ho fialan-tsiny. Ny voalohany hoy izy taminy: 'Aho, nividy toeram-piompiana, ary izaho tokony handeha hizaha azy. Manontany anareo aho mba hanala tsiny ahy. '
14:19 Hoy ny iray:: 'Nividy omby folo, ary izaho handeha handinika azy ireo. Manontany anareo aho mba hanala tsiny ahy. '
14:20 Hoy ny iray:, 'Izaho efa naka vady, ary koa izany no tsy afaka ny handeha. '
14:21 Ary niverina, ny mpanompo nilaza izany zavatra izany tamin'ny tompony. Dia hoy ny raim-pianakaviana, lasa tezitra, hoy izy tamin'ny zatovony: 'Mandehana faingana ho eny an-dalambe sy ny manodidina ny tanàna. Ary aza mitondra eto ny mahantra, ary ny sembana, ary ny jamba, ary ny mandringa. '
14:22 Ary hoy ilay mpanompo: 'Efa natao, tahaka ny baiko, Tompo, ary mbola misy trano. '
14:23 Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony: 'Mandehana any an-lalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny hiditra, ka ny tranoko mba ho feno.
14:24 Fa lazaiko aminareo, mba tsy hisy ireny olona izay nasaina dia hanandrana ny andro firavoravoana. '"
14:25 Ary nisy vahoaka be niaraka taminy. Ary Jesosy nitodika nijery manodidina, dia hoy izy taminy:
14:26 "Raha misy manatona ahy, ka tsy mankahala ny rainy, aman-dreny, sy ny vadiny, sy ny ankizy, sy ny rahalahiny, sy anabavy, ary eny, na dia ny ainy, dia tsy afaka ny ho mpianatro.
14:27 Ary na iza na iza no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy afaka ny ho mpianatro.
14:28 Fa iza eo aminareo, te hanorina tilikambo, no tsy mipetraka aloha sy mamaritra ny vola lany izay ilaina, mba hahitana raha manana ny fitaovana mba hamenoana azy?
14:29 Raha tsy izany, rehefa avy dia efa nametraka ny fototra sy tsy mahavita azy, izay rehetra mahita azy dia mety hanomboka naneso azy,
14:30 nanao hoe:: 'Io olona io dia nanomboka nanao trano izay izy tsy nahavita.'
14:31 Na, moa no mpanjaka, dia efa mandroso ny hanao hiady amin'ny mpanjaka hafa, tsy mipetraka aloha mihevitra na mety ho afaka, amin'ny iray alina, mba hihaona izay tonga ilay mitondra roa alina?
14:32 Raha tsy, Ary raha ny hafa mbola lavitra, fandefasana ny delegasiona, dia mety hanontany azy ho amin'ny lafiny fandriampahalemana.
14:33 Noho izany, rehetra aminareo izay tsy hiala izay rehetra ananany dia tsy afaka ny ho mpianatro.
14:34 Koa tsara ny sira. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. Na iza na iza manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. "